Tantara, kolontsaina, vakoka: entanina hahafantatra an’Analamanga ny lehibe | NewsMada
Tantara, kolontsaina, vakoka: entanina hahafantatra an’Analamanga ny lehibe
Manomana tetikasa hoenti-mampahafantatra bebe kokoa ny faritra Analamanga, ny tantara, ny kolontsaina ary ireo vakoka marobe ao aminy ny Ofisim-paritry ny fizahantany (Ortana), mandritra ity fotoam-pialan-tsasatra. Tsy ny ankizy sy ny tanora indray no kendrena amin’izany fa ny olon-dehibe mihitsy.
Mandritra io volana aogositra sy septambra io àry, hisy ny fitsidihana maimaimpoana ireo toerana mampiavaka ity Renivohitra ity. Tsy an-tongotra io fa amin’ny fiara. Misy isaky ny alarobia sy ny asabotsy ity hetsika ity. Ho fantatra miandalana kosa ny toerana hiaingan’ny fitsidihana.
Etsy ankilan’izay, miato kely aloha ny « Classe patrimoine », tetikasa tanterahin’ny Ortana, mandritra ity fotoam-pialan-tsasatra ity. Samy manana ny fandaharam-potoany mantsy ny ankizy sy ny isan-tokantrano. Raha tsiahivina, amin’ny alalan’ity tetikasa ity no itondran’ny ofisy ireo mpianatra amina sekoly na koa ankizy sy tanora amina fikambanana samihafa, mitety ireo toerana mahaliana eto Iarivo.
Ankoatra ny tsidi-bohitra an-tongotra sy ny fitetezana ireo toeram-pizahantany eto afovoan-tanàna, hetsika iray hafa isarihana ny mponina sy ny vahiny eto an-dRenivohitra ny « Hiragasy makotrokotroka », isaky ny alahady hariva, etsy Ambohijatovo.